अध्यागमनमा डरलाग्दो सेटिङ, विमान भित्रैबाट पाँच भारतीय पक्राउ. पूरा हेर्नूहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
अध्यागमनमा डरलाग्दो सेटिङ, विमान भित्रैबाट पाँच भारतीय पक्राउ. पूरा हेर्नूहोस
काठमाडौं, फागुन – अवैध ढंगले नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट हङकङ जान लागेका पाँच भारतीय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। तीन जनालाई अध्यागमन पार गर्नेबित्तिकै र बाँकी दुईलाई उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान भित्रैबाट पक्राउ गरिएको हो। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
Prevआज पैसा पठाउदै हुनुन्छ? कतार, मलेसिया, साउदी दुबई लगायत बिभिन्न बिदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ …
Nextकाेरियन लाउरेकाे फुर्ति बिहेमा डिग्री पढेकी केटी सँगै पल्सर बाईक माग्याे (पूरा पढ्नूहोस)
काठामाडौंमा ठूलो भूकम्पको धक्का महसुस…
नेपालमा आज फेरी: ६ जना थपिए काेराेना संक्रʼमित, कुल संख्या २७३ पुʼग्याे